Ma xidhatay maaskaro sax ah? Dad badan ayaa inta badan sameeya khaladaadkan! - Wararka - Baili Medical Supplies (Xiamen) Co., Ltd.
Nolol maalmeedka, dad badan si sax ah uma xidhaan maaskaro! Haddaba sidee looga fujin karaa maaskarada si sax ah? Waa maxay khaladaadka aan la samayn marka la xidho maaskaro? Gaar ahaan, qof kastaa mar walba wuu la yaabay, sidee loo kaydiyaa maaskarada ka dib marka la saaro? Aqoonta sayniska caanka ah ee soo socota ee waji-xidho ayaa kaliya lagu dabaqi karaa waji-xidhka caafimaadka caadiga ah ama waji-xidhka qaliinka caafimaadka ee lagu xidho nolosha caadiga ah iyo goobaha shaqada. ã€'
Xiro maaskaro, ha samayn khaladaadkan!
1. Ha beddelin maaskarada muddo dheer
Gudaha maaskarada ayaa si fudud ugu dheggan walxaha ay ka midka yihiin borotiinka iyo biyaha uu sii daayo jidhka bini'aadamka, taas oo keenta koritaanka bakteeriyada. "Hagaha Dadweynaha iyo Kooxaha Xirfadlayaasha Muhiimka ah ee Xiran Maaskaro (Ogosto 2021)" waxay ku talinaysaa in wakhtiga xidhashada ee maaskaro kastaa aanu ka badnayn 8 saacadood.
2. Xiro maaskaro qallafsan, qoyan ama wasakhaysan
Marka maaskarku wasakh yahay, qallafsan yahay, dhaawacmo, ama urayo, waxqabadka ilaalinta waa la dhimi doonaa oo u baahan in la beddelo wakhtiga.
3. Xidho maaskaro badan isku mar
Xirashada maaskaro badan ma aha oo kaliya inay si wax ku ool ah u kordhin karto saamaynta ilaalinta, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa caabbinta neefsashada waxayna dhaawici kartaa cidhiidhiga maaskarada.
4. Xidhashada waji-xidhka carruurta
Markaad iibsanayso waji-xidhka carruurta, waa inaad hubisaa da'da lagu dabaqi karo, heerarka fulinta, iyo qaybaha alaabta ee alaabta. Waa inaad sidoo kale doorataa maaskaro cabbirka wejiga ah oo ku salaysan saamaynta isku-dayga ubadka. Khatarta neef-qabatinka awgeed, waji-xidhka carruurtu kuma habboona dhallaanka da'doodu ka yar tahay saddex sano. .
Sidaa darteed, ilaalinta shakhsi ahaaneed ee dhallaanka iyo carruurta da'doodu ka yar tahay saddex sano waa inay noqotaa ilaalin aan qarsoodi ahayn, waalidkuna waa inay isku dayaan inay ka fogaadaan inay carruurtooda geeyaan meelaha dadku ku badan yahay.
5. Dib u warshadaynta waji-xidhaha la tuuri karo
Isticmaalka uumi, karkarinta, iyo buufinta aalkolada ma oggolaan doonto dib-u-warshadaynta waji-xidhaha la tuuri karo, laakiin waxay yaraynaysaa saamaynta ilaalinta, gaar ahaan waji-xidhka loo isticmaalay gaadiidka dadweynaha ee gobollada isaga gudba ama isbitaallada iyo meelaha kale ee dadku ku badan yahay. Waxaa lagugula talinayaa inaadan dib u isticmaalin.
Hore:Kala soocida xulashada maaskarada qalliinka
Xiga:Farqiga u dhexeeya goonnada go'doominta ee la tuuri karo, gooyada ilaalinta iyo dharka qalliinka